TCL TS6110, waa hab raqiis ah oo lagu dhiso tiyaatar guri oo leh Dolby Audio | War gadget
Miguel Hernández | 05/04/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 27/03/2021 19:57 | General, Reviews
Marka la yimaado baararka codka iyada oo loo marayo dekedaha HDMI iyo horumarkiisa oo ay la wadaagaan qaar ka mid ah iyo awooda codka ee caqliga badan, hadda in ka badan abid inta badan adeegsadayaashu waxay doortaan inay ku dhejiyaan nidaamyada tiyaatarka guriga qiimo aad u jaban, oo ah wax mar, xilligii "analog" ahaa wax qiimo leh ku dhowaad mamnuuc.
Gurigan waxaan jecel nahay inaan ku tusno nooc kasta oo beddelaad ah, oo aad uga fog alaabooyinka dhammaadka sare leh ee illaa iyo hadda aan kugu tusnay waaxda Cinema-guri, Waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqaynta qotada dheer ee TCL TS6110 guriga tiyaatarka dhawaaqa, aan aragno sida uu u dhaqmayo iyo waxa astaamaha ugu fiican ay yihiin.
2 Isku xirnaanta iyo qaabeynta
4 Khibrada isticmaale iyo tayada maqalka
TCL waa sumad la aqoonsan yahay oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee warbaahinta, inkasta oo aan xitaa aragnay aaladaha mobilada ee ay shirkaddu billowday, xaqiiqadu waxay tahay in had iyo jeer lagu yaqaanay telefishannadeeda oo leh qiimo wanaagsan oo lacag ah iyo sidoo kale alaabada maqalka, tan dambe iyagoo ah kuwa maanta halkaan na keenay. Xaaladdan oo kale, TCL si ay ugu hagaajiso qiimaha inta ugu badan badiyaa kama baxdo naqshad la aqbali karo, waana taas waxa ku dhacay cutubkan aan tijaabinnay.
Cabbirka Soundbar: 800 x 62 x 107mm
Cabbirka subwoofer: 325 x 200 x 200m
Miisaanka baar: 1,8 Kg
Miisaanka Subwoofer: 3 Kg
Ka samaysan gebi ahaanba caag madow, oo ay wejiga hore ku dahaadhsan tahay maro, waxay leedahay cidhib fiican oo xagga hoose ah si loo yareeyo gariirka. Qaybta kore waxay leedahay xulid multimedia taabasho leh, halka dharka gadaashiisa guddi LED ah qarsoon yahay midabyo tilmaami doona mugga iyo nooca isku xidhka. Dhabarka gadaashiisa waa isku xirnaanta aan gadaal ka hadli doonno. Cabbirka sidoo kale waa la xakameeyay Sub, in kasta oo xaaladdan oo miisaankeedu muuqdo ka sarreeyo baarka dhawaaqa iyo suufka caagga ah si loo yareeyo isku xidhka.
Isku xirnaanta iyo qaabeynta
Waxaan ku bilaabaynaa qaybta isku xirnaanta, Ugu horreyntii, waxaan muujineynaa in barxadda dhawaaqa ay ka mid tahay nidaamka isku xirnaanta wireless-ka ee Bluetooth 4.2, iyada oo aan la iloobin xaqiiqda ah in isku xirnaantooda ugu weyni ay tahay inay ka timaaddo dekedda HDMI ee dhabarka ama, haddii taa la waayana, soo-gelinta codka indhaha. Si kastaba ha noqotee, kuwa ugu caansan, dekedda USB ayaa sidoo kale lagu daray taas oo noo oggolaan doonta inaan ku xirno ilaha codka iyo xitaa jir duug ah laakiin ugu yaraan caadiga ah isku xirnaanta AUX 3,5-milimitir.
Sub-ka qaybtiisu waxay leedahay xiriir buuxa oo otomaatig ah iyo xarig-la'aan ah oo leh barta dhawaaqa iyada oo loo marayo hal badhan oo isku xidhaya kaas oo joojin doona biligleynta markii isku xidhkaas la aasaaso. Taasi waxay na badbaadin doontaa fiilo, maahan fiilada korontada, oo madaxbanaan. Qaabeynta ayaa ah mid aad u fudud, maadaama ay had iyo jeer mudnaan siin doonto soo gudbinta codka iyada oo loo marayo isku xirnaanta HDMI, si kastaba ha noqotee, had iyo jeer waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la isticmaalo xakamaynta qalabka codka inta ka hartay howlaha, ka baxsan kor u qaadista iyo hoos u dhigista mugga telefishanka, oo aan ku sameyn karno isla xakamaynta.
Waa in la ogaadaa in Laba qaansooyin ayaa lagu soo daray baakada noo oggolaan doonta inaan toos ula jaanqaadno baarka dhawaaqa derbiga, iyo sidoo kale warqad u adeegi doonta sidii qorshe marka la sameynayo godadka u dhigma ee gidaarka. Wax cajiib ah marka la fiiriyo qiimaha kala duwan ee sheygu yahay.
Markii aan idhi dhammaan waxyaabaha kor ku xusan, waxaan ku bilaabaynaa taas dekedda isku xidhka HDMI waxay leedahay teknolojiyadda ARC, haa, waxaan ku sii jirnaa HDMI 1.4. Dhinaceeda, waxay noo ogolaaneysaa inaan si toos ah ula macaamilno xakamaynta telefishanka barta dhawaaqa, iyo sidoo kale inaan dirno oo aan helno macluumaadka labada aaladood, taasina waa faa'iido caan ah. Dhinaceeda, barxad-dhawaaqeedku ma laha wax isku xirnaanta wireless-ka sarreeya.
Waxaan leenahay a 95db awoodda ugu badan ee u dhiganta awooddeeda ugu badan 240W. Uma xuma barta dhawaaqa leh culeyska caynkaas ah. Heerka iswaafajinta ee aan haysano 5.1 hufnaan la siinayo oo ay bixinayso Dolby, Xaqiiqdu waxay tahay in kasta oo xaqiiqda ah in codka si aad ah looga jaro xagga hore, haddana hufnaanta ayaa shaqadeeda qabata waana wax lagu farxo iyada oo aan la dareemin. Si kastaba ha noqotee, amarku wuxuu noo oggolaan doonaa inaan ku kala beddelno saddex u dhigmo isku dheelitirnaan kasta oo daqiiqado gaar ah sida: shineemo, TV iyo muusig.
Khibrada isticmaale iyo tayada maqalka
Waxa ugu muhiimsan ee noocan ah alaabtu waa had iyo jeer tayada maqalka, gaar ahaan markaan ka hadlayno sicirka qiimaha hoose, halkaas oo aan ka heli karno wax walba. Xaqiiqdu waxay tahay in ka hooseeya 150 euro sanqadha dhawaaqaasi uu fulinayo, gaar ahaan ku darista. Waxay na siisaa basas aad u fiican oo madax-bannaan oo ay ugu mahadcelinayaan subwoofer-ka madax-bannaan, Waxyaabaha qofku ka filan karo noocyada noocan ah, hase yeeshe, badanaa waa lagu soo daraa maxaa yeelay baasku wuxuu "daboolayaa" si sax ah cilladaha kale ee tayada maqalka, waana wax qofku filan karo.
Dhawaaqa xoogaa wuu siman yahay markaan ka hadlayno telefishanka iyo muusigga, xoogaa firfircooni yar ayaa ka dhiman, ka dib waxaad xusuusataa qiimaha oo aad xusuusataa in wax yar oo dheeraad ah la dalban karo. Marka laga hadlayo soo-saarista muusikada, waxaa xusid mudan in la difaaco, si kastaba ha noqotee, markay tahay ciyaarista filimada basaska qaarkood ayaa qarin kara wadahadalka, taasina waa mid si gaar ah dhibaato u leh habeenkii, markaa waa inaad ku ciyaarto qaababka qaabeynta hore ee fog.
Marka la soo koobo Waxaan helnaa badeecad si cadaalad ah u wareegsan oo tixgelinaysa kala duwanaanta tayada-qiimaha, waxay noo oggolaan doontaa inaan ku raaxeysano tiyaatarka guriga xaalado si wanaagsan u wanaagsan iyo xitaa inaan nafteena ku qancino heerkeeda maqalka oo aad u xoog badan. Waxyaabo kale oo aan badnayn ayaa igu soo dhaca qiimaha qiimahaas oo ay ka mid yihiin darbigay ku xidhayaan, subwoofer gaar u gaar ah, iyo HDMI ARC waxaad ka eegi kartaa Amazon 150 euro, iyo mid gaar ah Websaydhka TCL.
Ku dhejiyay: 5 April 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 27 Maarso 2021
Qalab aad u qurux badan iyo naqshad
Fududaan badan oo qaabeynta ah
Subwoofer madaxbanaan iyo Dolby Audio 6 wanaagsanaanta
Xoogaa dhawaaq fidsan
Bass wuu isku dhaafi karaa wadahadalka
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » TCL TS6110, waa hab raqiis ah oo lagu dhiso tiyaatar guri oo leh Dolby Audio